बिचरा कुशुम ? बिहे भएको वर्ष दिन नबित्दै श्रीमान यसरि गरे कुशुमको ह,त्या -
बिचरा कुशुम ? बिहे भएको वर्ष दिन नबित्दै श्रीमान यसरि गरे कुशुमको ह,त्या
१६ जेठ,काठमाडौं – बिश्व माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको विषम परिस्थितिमा दिन प्रतिदिन एक पछी अर्को घट,ना बाहिर आईरहेका छन् । २२ वर्षीय कुशुम पहारीको विवाह पनि भएको धेरै समय भएको थिएन । उनीहरुको टिकटकमा निकै रमाइला भिडियोहरु छन् । तर कुशुमको मृ’त्युको खबर ले सबैजनालाई भने निकै दु’खित बनाएको छ । म’हामारीमा एक पछि अर्का दु’खद घट,ना भएका सुनिएका छन् । तर यो घ’टना हृदय वि’दारक छ ।
सिन्धुपाल्चोक घर भई काठमाण्डौको कालिमाटीमा बस्दै आएका अजय श्रेष्ठले श्रीमती कुशुम पहरीलाई सं’सारवाटै वि’दा गरिदिएका हुन् । उनको श’व देख्न सकिने अवस्थामा पनि थिएन । बुढोलाई ज्वरो आएको छ भनेर बिहान ७ बजे कल गरेर राखेकी कुशुमले सधैको लागि बिदा भएर गईन कुशुमाका बुवाले बताएका छन् ।
विवाह भएको ९ महिना भएकी कुशुमको यसै बिचमा छोरी र ज्वाईको बीचमा पट,क- पट,क वि’वाद भईरहेको खुलाएका छन् । उनले छोरीलाई माइत ल्याएर राखेका थिए । तर श्रीमानले म अब यस्तो गर्दिन म र,,क्सी खाँदिन भनेर मा’फी मागेर उनले माइतवाट ल्याएका थिए । तर यसरी सं’सारवाटै विदा गरिदेलान् भन्ने उनलाई लागेको थिएन।
दिनभरी कालिमाटीमा ब्यापार गर्ने राती घर आएपछि श्रीमानले जहिले पनि दु’ख दिन्थे । भर्खर लाउँ खाउँ उमेरकी छोरीलाई ज्वाईले सि’ध्याइदिएपछि बुवा आमा वि’ह्वल भएका छन् । प्र’हरीले घ’टनाको अनुस,न्धान नि’ष्पक्ष गरेको अभिभावको भनाई छ । घ’टना भएपछि अजयले आफ्ना भाईलाई फोन गरेका थिए । फोन गरेर कुशुमलाई मैले सि’ध्याएँ प्र’हरी लिएर आइज भनेका थिए । Crime tv nepalले तयार पारेको हेर्नुहोस भिडियो रिपोर्ट :
Previous कम्युनिस्ट सरकारको बजेट,जनताको आखामा धुलो : नेपाली कांग्रेस
Next बो!क्सि भन्दै महिला माथि निर्घा*त कु*टपिट